विवेकशीलद्वारा सरकार र बिद्रोही नेकपाबीचको सहमतिको स्वागत — Sanchar Kendra
विवेकशीलद्वारा सरकार र बिद्रोही नेकपाबीचको सहमतिको स्वागत
काठमाडौं । नेपाल सरकार र नेत्र विक्रम चन्द नेत्रित्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच भएको सहमतिको विवेकशील दलले स्वागत गरेको छ । शनिबार दलका संयोजक समिति संयोजक बाबु शिवाकोटीले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकार र विप्लवबीच भएको सहमतिको स्वागत गर्दै दुवै पक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।
सरकारसँग भएको ३ बुँदे सहमतिअनुसार नेकपा खुला राजनीतिमा आउन सहमत भएको छ भने प्रतिबन्ध सरकारले हटाएको छ ।
आधिकारिकता पाएपछि उपेन्द्र यादवले किन दिए यस्तो कडा प्रतिक्रिया ?
जसपा विवादबारे निर्वाचन आयोगले गर्यो यस्तो निर्णय
निर्वाचन आयोग पुगे रेशम चौधरी
देउवा सरकारमा सहभागी हुँदै उपेन्द्र यादव, कुन-कुन मन्त्रालय पाए ?
जसपा आधिकारिकता विवाद- आज निर्वाचन आयोगको फैसला आउदै
ओलम्पिक अपडेट- चीनको अग्रता कायमै, क-कसले कति जिते पदक ?
आफ्नो नाम मुछेर एन्फा प्रशिक्षिक अलमुताइरीले राजीनामामा दिएपछि नेम्बाङले मुख खोले, के हो यथार्थ ?
माधव नेपाल बालुवाटार गएको भन्दै ओली आक्रोशित, फेरी दिए यस्तो प्रतिक्रिया